Biko mara na a na-emegharị ọdịnaya nke nkuzi a ugbu a iji gosipụta ntụzịaka kacha ọhụrụ. Ị nwere ike ịchọta ozi emelitere na ụfọdụ isiokwu metụtara COVID-19 n'ime usoro ọmụmụ ndị a:
ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa: Ọwa ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19
Usoro IPC: IPC maka COVID-19
Nnwale nyocha ngwa ngwa Antigen: 1) SARS-CoV-2 antigen fast diagnostic test; 2) Ihe ndị dị mkpa maka SARS-CoV-2 antigen RDT mmejuputa iwu
English - français - Español - 中文 - Português - العربية - русский - Türkçe - српски језик - فارسی - हिन्दी, हिंदी - македонски јазик - Tiếng Việt - Indian sign language - magyar - Bahasa Indonesia - বাংলা - اردو - Kiswahili - አማርኛ - ଓଡିଆ - Hausa - Tetun - Deutsch - Èdè Yorùbá - ਪੰਜਾਬੀ - isiZulu - Soomaaliga - Afraan Oromoo - دری - Kurdî - پښتو - मराठी - Fulfulde- සිංහල - Latviešu valoda - తెలుగు - Esperanto - ภาษาไทย - chiShona - Kreyòl ayisyen -Казақ тілі - தமிழ் - Ελληνικά
Asambodo: Asambodo Ndekọ nke Ntozu ga-adị maka ndị nsonye ndị nwere akara opekata mpe 80% nke mgbakọta akara dị n’ofe ajụ-aza ahụ niile. Ndị sonyere na -enweta Ndekọ nke Nweta nwekwara ike ibudata Badge Mepere emepe maka nkuzi a. Pịa ebe a ka ịmụta ka.
Modul 1: Mmalite nke nje ọrịa iku ume ndị na apụta, gụnyere COVID-19:
Modul 2: Ịchọpụta Nje ọrịa iku ume ndị na apụta, gụnyere COVID-19: Mkpachapụ anya na nyocha ụlọ ọrụ nyocha:
Modul 3: Nyocha Ụlọ Ọrụ Nyocha:
Na ngwụcha nke ngalaba a, ndị nsonye ga- enwe ike ịkọwa: ụdị nke nlele achọrọ, ụdị nke nyocha ụlọ ọrụ nyocha eji achọpụta ọrịa.
Modul 4: Nkwukọrịta Ihe Egwu yana Njikọta Obodo:
Modul 5: Njikọta Obodo:
Na ngwụcha nke ngalaba a, ndị nsonye kwesịrị: kọwaa opekata mpe ihe atọ mere ndị nzaghachi kwesịrị isonye ndị obodo n’oge ntiwapụ ọrịa, Depụta ihe aka mgba ndị enwere na njikọta obodo (CE) ma, Kọwaa atụmatụ maka CE na arụ ọrụ na nchọpụta, mgbochi na ịzaghachi ntiwapụ ọria
Modul 6: Igbochi na Ịzaghachi nje ọrịa iku ume na apụta, gụnyere COVID-19: